Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgalo ka bilaabay gudaha Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo howlgalo ka bilaabay gudaha Boosaaso
Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgalo ka bilaabay gudaha Boosaaso. [Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa howlgalo ka bilaabay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso oo ujeedku yahay ugaarsashada kooxaha argagixisada ah, saraakiil katirsan ciidamada ammaanka ayaa warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyay.
Howlgalka ayaa imaanaya maalin kadib markii ugu yaraan saddex qof lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo lala eegtay bar kantarool kutaala Boosaaso.
Ma jiraan warar muujinaya haddii ay jiraan shakhsiyaad lagu xiray howlgalka socda, kuwaasoo looga shaki qabo ku lug lahaanshaha weerarkii talaadada dhacay.
Dowladda Islaamiga ah ayaa mar dambe sheegatay masuuliyada weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhacay fiidkii xalay oo Talaado ahayd.